Relationships | Buzzy
သင့်ရဲ. ဒီအပြုအမူတွေဟာ ချစ်တင်းနှောရာမှာ မကျွမ်းကျင်သေးမှန်း သိသာပါတယ်
သင့်မှာ ဒီလိုအပြုအမူတွေ ရှိနေလား ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်ပါ
10 Mar, 12:14 PM
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ဘယ်သူက ပိုပြီး ဖောက်ပြန်သလဲ ?
ဘယ်သူက ပိုပြီးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကို ဒီဆန်းစစ်ချက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် ။
7 Mar, 09:58 AM
ချစ်တင်းနှောနေစဉ် အမျိုးသားများကို ဖမ်းစားထားနိုင်သည့် အချက် (၁၀) ချက်
သင့်အနေနဲ့ ချစ်တင်းနှောမယ် ၊ သင့်ချစ်သူခင်ပွန်းကို ထာဝရ ဖမ်းစားထားလိုမယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေ အိပ်ယာထက်မှာ လိုက်နာရမှာပါပဲ။
27 Feb, 02:49 PM
အမျိုးသမီးတွေ မငြင်းနိုင်မယ့် အမျိုးသားတို့ရဲ. အရည်အချင်း ခြောက်ခု
သင့်မှာရော ဒီအရည်အချင်းတွေ ရှိနေပြီလား ? မရှိသေးရင် ရှိအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ် ။
သင့်အဖော်နဲ့ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၇ ချက်
လင်မယားတွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်အဖော်နဲ့ အိပ်စက်ရာမှာ အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိတက်ပါတယ် ၊ ဒါကို အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း ၇ ချက်ပါ ။ဒီနည်းလမ်းတွေဟာ သင်တို့နှစ်ဦးကြား ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုမိုကောင်းမွန် စေပါလိမ့်မယ်။
19 Feb, 12:41 PM
အမျိုးသားတွေ ဒီ အကြောင်း (၇) ချက်ကြောင့် ဖောက်ပြန်ကြတယ်
သင့်အနေနဲ့ သတိထားနိုင်ဖို့ ၊ သတိမူ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ....
သင်နဲ့ သင့်အဖော်ကြား ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိဖို့ တစ်နှစ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြိမ် ဆက်ဆံမှု ရှိသင့်သလဲ ?
၂၀၀၃ ခုနှစ်က ကောက်ယူခဲ့တဲ့ စစ်တမ်းတွေမှာ အခြေတည်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူကောင်မလေးကို မမေးသင့်တဲ့/မပြောသင့်တဲ့ စကားအခွန်း ၂၀
သင့်အနေနဲ့ ချစ်သူရှိရင် ဒီစကားလေးတွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
12 Feb, 04:49 PM
အမျိုးသမီးတွေ ဒီအကြောင်း (၄) ချက်ကြောင့် ဖောက်ပြန်ကြတယ်
သင့်အနေနဲ့ သတိထားနိုင်ဖို့ ၊ သတိမူနိုင်ဖို့နဲ့ ပြုပြင်နိုင်ဖို့
9 Feb, 12:16 PM
ချစ်သူများနေ့အကြောင်း သိထားသင့်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆယ်ချက်
ချစ်သူများနေ့နီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်သူများနေ့အကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
8 Feb, 07:56 AM
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရဖို့ သုံးသင့်တဲ့ နည်းပရိယာယ် ၁၀ ခု
ဒီနည်းလမ်းတွေထဲက သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အချက်အချို.ကို လိုက်နာရုံပါပဲ
4 Feb, 08:18 AM
ချစ်တင်းနှောနေစဉ် အမျိုးသားတို့ မပြုလုပ်သင့်တဲ့ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာ အချက်များ
သင့်အဖော်နဲ့ ချစ်တင်းနှောစဉ်မှာ ဒီအပြုအမူတွေကို မဖြစ်မနေ ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
2 Feb, 12:36 PM
အိပ်ယာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက် ၉ ချက်
မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ အတူအိပ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေရင်ခုန်တက်ကြတယ် ၊ စိတ်ဝင်တစား ရှိကြတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား ? ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အထူးခြားဆုံးသော မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ၁၀ ခုအကြောင်း
သင်ရော သူတို့လို ထူးထူးခြားခြား မင်္ဂလာဆောင်ချင်စိတ်ရှိလား ၊ သင်ဆိုရင် ဘယ်လိုမင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပချင်လည်း ဆိုတာ ပြောပြခဲ့ပါဦး
3 Jan, 03:47 PM
ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်ဖက် အမျိုးသားအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းကောင်းများ
။ အမျိုးသမီး အများစု၏ တူညီသော ရည်မှန်းချက်မှာ ချမ်းသာပြည့်စုံသော လင်ယောင်္ကျားအား ပိုင်ဆိုင်လိုကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ဤသို့ သော အမျိုးသမီးများ အတွက် သင့်တော်သော လမ်းညွန်ချက်များ အကြံပြုချက်များ ဖော်ပြပေးချင်ပါသည် ။ စိန်ခေါ်ကြည့်ပါ ။